Naya Post Nepal | पलको अबस्था कस्तो छ ? पललाई भेटेर फर्किएका जय बस्नेतले सुनाए यस्तो मनछुने कुरा, के भने पलले ? भिडिओ
पलको अबस्था कस्तो छ ? पललाई भेटेर फर्किएका जय बस्नेतले सुनाए यस्तो मनछुने कुरा, के भने पलले ? भिडिओ
काठमाडौं । एक किशोरीलाई क,र णी गरेको आरोप लागेका नेपाली चलचित्रका नायक पल शाहविरुद्धको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगे को छ । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अब अदालत मा मु,द्दा दर्ता,को तयारी थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले अनुसन्धान सकेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एक–दुई दिनमै पलविरुद्धको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत तनहुँमा बुझाउने तयारी छ । कर णी मुद्दामा बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुस न्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रहरीले तीन पटक सम्म अदालतवाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरेको हो । पछिल्लो पटक लिएको म्यादले २५ दिन पुग्ने देखिन्छ ।
पलविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र इला का प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटमा उजुरी परेको हो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पलमाथिको आ रोप प्र,माणित हुने प्रमाण जुटाएको प्रहरीको दाबी छ ।
प्रहरीले पलले कि,शोरीसँग गरेको कल रेकर्ड, म्यासेजलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिइएको छ । यस्तै, पीडितले उजुरीमा लगाएको आरोपलाई विभिन्न कोणबाट पुष्टि गर्ने काम गरिएको छ । घटनामा नाम जोडिएका अरू व्यक्तिसँग पनि प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ ।
यसअघि, पलविरुद्ध गएको बिहीबार नवलपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । पलले ०७७ चैत ७ गते गैँडाकोटस्थित एक रिसोर्टमा सुटिङका लागि गएको बेला कर णी गरेको भन्दै जाहेरी दिइएको थियो ।
सोही जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । पलले भने गैँडाकोटमा आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो भएको दाबी गरेका छन् । गैँडाकोटमा रहेको रिसोर्टमा पल १०१ नम्बरको कोठामा बसेको र पीडित किशोरी १०२ नम्बर कोठामा बसेको बताइएको छ । सोही रात पल किशोरीको कोठामा गएर कर णी गरेको आरोप छ ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्र,ममा सु टि ङ युनिट रिसोर्टमा बसेको पुष्टि भइसकेको छ । पीडित किशोरीले राति ११ बजे आफू बसेको कोठामा आएर प,लले कर ण्ी गरेको बयान दिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
गैँडाकोटमा पलको बयान भए पनि उनमाथि म्याद थपलगायत प्रक्रिया तनहुँबाट अगाडि बढेको हो ।
एकै प्रकृतिको घ,टना भएकाले एकै कार्यालय बाट मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने भएका ले तनहुँबाट म्याद थपलगायत प्रक्रिया गरिएको हो ।
२०७८ चैत्र ७, सोमबार प्रकाशित0Minutes 1210 Views